5 eray oo ay dhibsatay’ Villa Somalia oo shaqadiisa ku waayey Dr. Walters Samah - Awdinle Online
Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo qoraal soo dhigay facebook ayaa sheegay in Dr. Samah la cayriyey kadib markii uu bixiyey comment kooban oo ay dhibsatay Villa Somalia, sida uu yiri. Hoos ka aqriso qoraalka Cabdiraxmaan.
War illeyn comments baacsigii Villa Somalia wuxuu gaaray beesha caalamka. Dr. Walters Samah oo madax ka ah qeybta xog taxliilinta AMISOM ayaa sida uu sheegay shaqadiisa ku waayey comments shan eray ah oo uu ka dhiibtay wareysi uu Matt Bryden siiyey taleefishinka France24. Waraysiga ayaa la xariiray weerarkii ay Al-Shabaab ka geysteen EX-Koontarool Afgooye 28/12/2019-kii ayna ku dileen in ka badan 80 ruux. Waraysiga oo la soo geliyey bogga taleefashinka ku leeyahay LinkedIn ayaan comment 5 eray ah saaray buu yiri Dr. Walters, anigoo ku qoray.
“waa sax, waa waraysi mug leh”
Muddo kaddib ayaa Ambasador Madera, oo isagu ah Ergeyga Midowga Afrika Soomaaliya u qaabilsan, wuxuu iigu yeeray xaafiiskiisa. Wuxuuna ii sheegay in dowladda Soomaaliya ay dacwo ka tahay comments aan waraysiga ka bixiyey, waxayna sheegtay in aan taageeray wareysi dowladda looga soo horjeedo.
Sow waxani kalsooni darri ma dhaafin oo dhaqan xumo uma tillaabin? Sow dhaqan kali-talis oo tabar la’aan ah maaha? Ka warrama haddii ay qoladani awood lahaan lahayd? Ma oga miyaa in Soomaali xor tahay oo aan hadalkooda la xakamayn karin. Sow ma oga in in badan oo ka mid ah internet iyo mobile haystaan, in kaloo badanna dunida xorta ah ku nooshahay?
Wallee N&N waxooda waa naf la caarinimo, eelka ay reebaan se muddo wuu ina haysan doonaa.
Previous articlePakistan oo ka goconeysa Askar uga dhimatay howlgalkii rejo-soo celinta ee Soomaaliya!
Next article132-ruux oo ku xayirneyd Sacuudiga DFS oo dalka dib ugu soo celisay.